Ma ị nọworị na-azụ ahịa kemgbe afọ iri ma ọ bụ na ị na-achọ ịmalite nke gị, ịnwe ọnụnọ dị n'ịntanetị siri ike maka akara gị abụghị nke mkparita ụka. Dịka ịnwere ụlọ ọrụ brik na ngwa agha maka azụmaahịa gị na-anọghị n'ịntanetị, ị ga-enwerịrị aha ọnụnọ n'ịntanetị nke ndị ahịa gị na atụmanya gị nwere ike itinye aka na ika gị. Naanị otu ụzọ ị ga - esi adọta, nwee obi ụtọ, ma toro onye ahịa gị n'ịntanetị bụ site na ịnweta weebụsaịtị mara mma, arụ ọrụ. O di nwute, inatala ohere iji wezuga akụkụ a dị mkpa nke azụmaahịa gị nye ndị otu ọkachamara a ma ama na ntụkwasị obi na Semalt.
Nchịkọta weebụsaịtị bụ nha na nyocha nke data dị mkpa iji ghọta omume nke ndị ọbịa nke saịtị gị. N'itinye data ziri ezi, ị nwere ike ịme mkpebi ndị nwere nghọta ma mee nyocha banyere ihe ndị ga - ege gị ntị ga - abụ n'ọdịnihu. Ọzọkwa, mgbe ị ji data ndị a, ị nwere ike ịhazi ma mepụta ọdịnaya bara uru maka ndị ọbịa gị, ha onwe ha, bụrụkwa ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe nye ika gị.
Must ga-ahụrịrị data ị ga - eji tụọ ma nyochaa arụmọrụ saịtị gị yana isi ihe ngosipụta nke na - ewulite uto azụmahịa gị, dịka ọnụego mgbanwe, ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa, ibe ndị a na - eleta ugboro ugboro, wdg. site n'enyemaka nke ngwaọrụ nyocha saịtị dị mkpa, ị nwere ike ịhazi data gị iji mezuo ebumnuche azụmahịa gị.
SEO bụ mwepu nke Search Engine Optimization, ọ bụ ọganiihu na-aga n’ihu nke ogo na ọnụọgụ okporo ụzọ gị na ebe nrụọrụ weebụ gị site na nsonaazụ nchọta nke nchọta. Dịka i guzosiri ọnụnọ n'ịntanetị maka azụmahịa gị, ịkwesịrị ịmepụta ọdịnaya gbara ọkpụrụkpụ na nke dị mkpa nke na-adọta, na-atọ ụtọ, ma na-eme ka ndị na-ege gị ntị tinye aka na ika gị. Site na ihe omuma na ntinye nke omume kacha mma banyere omume SEO kacha mma, ị nwere ike ịmepụta ọdịnaya dị elu nke dị elu na nsonaazụ ọchụchọ ọchụchọ (SERPs) ma na-adọta ndị ọbịa na weebụsaịtị gị. Ka ị na-enwekwu ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ gị, ka ị na -emekwu ohere ị ga - eji mee ka ọtụtụ mmadụ kwenye ịbụ ndị ahịa gị.
Ihe omuma atu banyere otu isiokwu SEO siri di elu na SERPs, o kwesiri ibu ihe ochicho ahia gi ka ị bulie elu maka isi okwu bara uru na ahia gi.
Were elu dị elu karịa ndị asọmpi gị ma soro ndị ahịa tinye aka site na iji mkpụrụ okwu ọdụ ọdụ dị ogologo. Nsonaazụ na ọdịnaya dị elu na-enye gị ohere mgbe ndị ahịa na atụmanya na-achọ ọdịnaya nke na-edozi nsogbu ha.
Kedu ihe kpatara Họrọ Semalt?
Anyị ghọtara etu ọnụnọ ọnlaịnụ n'ịntanetị gị dị mkpa dị nye ndị ahịa gị na, kachasị mkpa maka akara azụ gị. Mgbe gị na gị na-emekọ ihe, anyị na-ekwe gị nkwa n’agbanyere ajọ nsogbu gị na ụlọ ọrụ dijitalụ ndị ọzọ, anyị raara onwe anyị nye ma doo onwe anyị ịgbanwe akụkọ ahụ. Can nwere ike iburu ụzọ taa n'inweta ndị ahịa na atụmanya ahịa gị nke ọma n'agbanyeghị afọ ole ọ dị ma ọ bụ nke azụmahịa gị.
Ndi okacha amara n’etiti gi di na beck gi ma kpoo 24/7. Anya abụghị ihe mgbochi. Asụsụ abụghịkwa ihe mgbochi. Kpọtụrụ anyị taa.
O dikwa gi ka igha ime ka azumahia gi sie ike n’ihi nsogbu ego ma obu ihe ndi ozo? Anyị na-enye usoro ịnye ọnụahịa dabara adaba nke ahaziri iji daba adaba na mmefu ego gị. Anyị na-enyekwa gị ọtụtụ ihe mgbakwunye maka gị na anyị na-emekọrịta ihe, anyị ga-enwe obi ụtọ ịbụ akụkụ nke akụkọ ịga nke ọma azụmahịa gị.
Semalt bụ ụlọ ọrụ dijitalụ zuru oke nke ndị ọkachamara nwere onyinye raara nyego maka mmepe na arụmọrụ nke weebụsaịtị gị. Site na ndị ọkachamara na akụkụ dị iche iche nke ịmalite ọnụnọ azụmahịa dị n'ịntanetị, ị nwere ike ijide n'aka na ị nwetarala onyinye kachasị mma ego nwere ike ịzụta, n'agbanyeghị oke mmefu ego gị. Anyị kpuchiela azụmahịa gị. Anyị emeela ọtụtụ ọrụ n'oge gara aga, n'okpuru ebe a bụ nzaghachi site n'aka otu ndị ahịa anyị, ndị nwere obi ụtọ na afọ ojuju.
N'agbanyeghị afọ ma ọ bụ ogo azụmahịa gị, ị nwere ike ịkụ ndị asọmpi egwuregwu egwuregwu SEO ha. Naanị chọta okwu ndị na-eme ka ndị na-asọ mpi gị na-aga ma jiri ha na saịtị gị, na-akụ ha egwuregwu nke ha. Ike agwụla gị n'ihe mgbaru ọsọ azụmahịa gị.
Kedu ọrụ Semalt na-enye?
Na Semalt, ebumnuche anyị bụ isi bụ itolite ọnụnọ gị n'ịntanetị. N’ụbọchị niile, anyị na-agba mbọ na-eme ka azụmahịa gị ka mma. Ndị a bụ ụzọ dị mkpa anyị siri nyere gị aka iru ebumnuche azụmahịa gị.
N'ime afọ iri gara aga, anyị zuru oke nchịkọta isiokwu isiokwu Semalt na nyocha Web iji nyere gị aka:
Lelee otu ebe nrụọrụ weebụ gị siri dị na SERPs.
Chọpụta njehie njikarịcha saịtị gị.
Nyochaa arụmọrụ weebụsaịtị nke asọmpi gị
Nwee emelite, na mkpesa mkpokọta weebụ zuru oke.
Ewezuga ịnye ọrụ gị maka azụmahịa gị, anyị na-enye ọrụ mkpokọta mkpokọta weebụ nke na-ahụ na ị ga-enweta nsonaazụ achọrọ maka azụmahịa gị. Ebe nrụọrụ weebụ gị na ọdịnaya ga-ebuli elu karịa ndị asọmpi gị n'ime oge dị mkpirikpi oge ị ga-ekpebi ka anyị na anyị na-akpakọrịta.
Site na ọrụ nyocha saịtị anyị dị mma, ị ga-enweta data dị mkpa iji mezuo ebumnuche azụmahịa gị. Lelee nyocha nke ndị ahịa anyị na ọrụ nchịkọta weebụ anyị.
Ọrụ Semalt SEO
Anyị na-enye ndị ahịa anyị SEO ọrụ na agbanyeghị mmefu ego ha ma ọ bụ azụmaahịa ha. Anyị ghọtara na ịchọrọ ọrụ SEO iji mee ka ọnụnọ gị n'ịntanetị dịkwuo elu iji bulie isi ahịa ndị ahịa gị na ịnya ụgbọ elu, yabụ anyị emepụtala ngwugwu SEO abụọ dị iche iche dabara na mkpa azụmahịa gị.
Nwere ike nweta nsonaazụ dị mma n'ime obere obere oge enwere ike ma ọ bụrụ na ịzụta ngwugwu AutoSEO taa. Site na ọnụahịa dị ọnụ ala nke $ 0.99, ị ga-enweta ezigbo ego maka ọrụ SEO nke edobere maka:
Na-eme ka hụpere gị na ebe nrụọrụ weebụ gị
Nwepu peeji nke peeji niile na weebụsaịtị gị.
Systemsmepụta usoro njikọ njikọ dị mkpa maka weebụsaịtị gị.
Nchoputa Keywords na niche ahia gi
Nchịkọta nchịkọta weebụ na-enyere gị aka ịtọ ebumnuche azụmahịa gị.
Anyị na-anya isi anyị n'inye azụmahịa gị ọrụ ziri ezi iji too. Nke a bụ nkwupụta nke ndị ahịa nwere afọ ojuju gbasara ngwugwu AutoSEO.
Also nwekwara ike ịmalite ngwugwu azụmahịa gị taa na ngwugwu AutoSEO. Anyị na-enye gị ego ọrụ ọrụ Whitehat SEO kachasị mma nwere ike ịzụta.
Site na ngwugwu FullSEO anyị, a na-ekwe gị nkwa ọrụ kachasị mma nke Whitehat SEO ga-enyere gị aka ịka ọkwa karịa ndị asọmpi gị n'oge. Mkpakọrịta anyị na taa iji nye azụmahịa gị ihe nkwado dị n'ịntanetị ka ọ dị mkpa iji bulie mmata akara ịntanetị gị. Ndị a bụ ụfọdụ ọrụ usoro SEO dị elu e mere iji zụlite azụmahịa gị:
Mbido webusaiti na nke ime
Elling manye ọrụ ide ọdịnaya
Sistemụ Njikọ ụlọ zuru oke
Ndị na-ere ahịa ha na ọrụ nkwado na ọrụ ịlechara ya.
Ikwesighi igbanye itinye ego na oganihu azụmaahịa gi n'oge ọzọ. Kpọọ anyị taa ka ịmatakwu banyere atụmatụ ịkwụ ụgwọ anyị na-agbanwe agbanwe na-ekwe nkwa ka ị bido ịmalite ogo ụlọ ọrụ aha gị.
Anyi nwere ndi amam-ihe ma nyekwa aka doro anya ndi nwere aka ike na imeputa vidiyo a na-ekekọrịta ma n’iile na ntanetị. Also chọkwara vidiyo ga-atọ gị ụtọ ma dọta ndị na-ege gị ntị itinye aka na azụmahịa gị. Ndị otu vidio anyị nwere ahụmịhe iji mee ka ihe nkịtị dị egwu. Ikwesiri igosiputa ndi ahia gi ka ahia gi si enyere ha aka. Ihe ị ga - eme bụ ịnye anyị oku taa, anyị ga - atụgharịkwa echiche gị gaa na vidiyo nkwado dị egwu nke ga - enweta nsonaazụ gị.
Ebe nrụọrụ weebụ gị, dị ka ọfis gị na-anọghị n'ịntanetị, ga-abụrịrị nke a rụziri nke ọma iji dọta okporo ụzọ nje. Ghọtara na akụkụ a nke azụmahịa gị nwere ike ịme ma ọ bụ mebie azụmahịa gị. Dị ka nke a, ị ga-ahapụrịrị ndị ọkachamara ka hazie mmepe websaịtị azụmahịa gị. Site na ahụmịhe anyị karịrị afọ iri n'ịrụ ọrụ dị iche iche, ị nwere ike ijide n'aka na ọrụ mmepe weebụ gị dị n'aka nke ukwuu. Anyị ji obi anyị niile na-echebara ahịa gị echiche, anyị jikwa obi anyị niile nweta nsonaazụ azụmahịa ịchọrọ.
Ndị otu ọkachamara nke raara onwe anyị nye anyị na-elekọta gị nke ọma. Site na atụmatụ ika rue na ogbugbu zuru oke, anyị nwere obi ụtọ ịgwa gị na anyị enwetala nsonaazụ mara mma maka ụdị dị iche iche gburugburu ụwa. Lelee akaebe nke ndị ahịa anyị na-eguzosi ike n'ihe ma kpọtụrụ anyị taa.
Zute Buddy Semalt Gị Dị Nro!
Anụmanụ ụlọ anyị, Turbo abụwo akụkụ nke otu anyị site na mmalite. Ọ ghọọ onye otu dị mkpa n’ezinụlọ Semalt. Dịka Turbo, anyị onwe anyị nwekwara ike ịbụ akụkụ nke akụkọ na-aga nke ọma maka azụmahịa gị. Agbanyeghị oge usoro azụmaahịa gị, anyị ga-enwe obi ụtọ isoro gị na-arụ ọrụ iji mezuo ebumnuche azụmahịa gị.
Kpọtụrụ anyị taa. Ndi otu ndi otu anyi nwere obi oma na ndi raara nye nke oru ha nwere obi uto ịza ajuju gi niile banyere otu anyi gha esi etolite udiri ahia gi na ntaneti. You na-enwe nchegbu banyere ihe mgbochi asụsụ? Ọ dị mma, anyị nwere obi ụtọ ịgwa gị na ndị isi anyị na-asụ otu asụsụ. Bụrụ na ọ bụ Chinese, Bekee, French, Italian, Dutch, Turkish, wdg, anyị na-asụ asụsụ gị. Kpọọ anyị taa, ka anyị bido ịmalite ịzụlite ọnụnọ azụmahịa gị n'ịntanetị.